ikhaya » iindaba » I-ASG ihlamba i-Tom Menrath ukuqinisa iiNkcazo zomsindo
I-ASG ihlamba i-Tom Menrath ukuqinisa iiNkcazo zomsindo
EMERYVILLE, CALIF.- Advanced Systems Group (ASG), I-data ehamba phambili, ividiyo, kunye nokuhlanganiswa komsindo, namhlanje ivakalisa umlindi weshishini somculo uTom Menrath uye wajoyina inkampani, ngoMeyi 15 osebenzayo. Ngokusekelwe e-Emeryville, i-Menrath iya kuqinisa imiba yomsindo yeeprojekthi ze-video-centric, kunye nokubonelela ngenkxaso ye-akhawunti.
Umongo osandul 'usebenze njengomphathi olawulayo weCauting Edge Audio & Group Group, emva kweminyaka ecaleni kwemihlanu ngeVintage King Audio njengomlawuli wophuhliso lobuchule. Ngaphambili, wachitha iminyaka engama-7 njengomlawuli wezophuhliso zoshishino kwiGititar Centre, kwaye naye wasebenza ne-Sweetwater Sound, Audio Agent LLC kunye ne-Monster Cable.
"Isixhobo somculo asiyiyona nto ephambili kuyo nayiphi na inkqubo yevidiyo, sifuna ukuba abathengi bethu bazi ukuba sinezinto ezinzulu malunga nezixhobo zomsindo njengoko sithetha ngevidiyo kunye nedatha," kutsho uDave Van Hoy, umongameli we-ASG. "I-ASG kwisiseko sayo yinkampani yokulalelwayo neyevidiyo, kwaye siye saqhubeka nendlela yethu yokuphulaphula njengoko sikhule. UTom uza kunceda ukuphucula izisombululo zethu zomsindo. "
Xhumana nomntu kwi-510-654-8300 okanye nge-imeyileTom@asgllc.com.
Isekelwe eNyakatho yeKalifornia namaofisi ePacific Northwest, eMzantsi California, kwingingqi yeRoyy Mountain naseNew York City, i-Advanced Systems Group LLC yase-Emeryville, i-Calif., Inikwe ubunjineli, iinkqubo, ukudibanisa, inkxaso kunye nokuqeqeshwa ekusasazeni, ifilimu, Iimarike zevidiyo zendalo kunye neenkampani ukususela kwi-1997. Ngamava angalinganiswanga kwisitoreji esabelwe ngokukhawuleza, ukuphathwa kwempahla ye-media, ukugcinwa kwezinto, ukuhlela, imibala kunye neenkqubo ze-VFX, i-ASG iye yaba enye yeefowuni ezinkulu ezinkulu zenkqubo yokugcina kunye nokwabelana ngokulandelwayo kwi-West Coast. Iqela le-ASG ligxininise kakhulu kwimpumelelo yabathengi, kwaye ifake kwaye ixhase ngaphezu kwe-SANN ye-350, ukuveliswa kwemveliso kunye neenkqubo zentsebenzo. Ukufumana olunye ulwazi, tyelelaWww.asgllc.comOkanye shayela i-510-654-8300.
Advanced Systems Group ASG Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Ukudibanisa ifilimu ukudityaniswa Iindaba zabasebenzi Iinkqubo zokudibanisa Injini yeVidiyo	2017-06-16
Previous: Icandelo le-Hollywood le-SMPTE® kunye ne-VES yaseLos Angeles ukuhlola ukunyaniseka okwenziwe kakubi kwiJuni kaJuni
next: Iingxelo zoLondolozo kwi-2017 NAB Show
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso kuwe: "ASG ihlamba i-Tom Menrath ukuqinisa iiNkcazo zomsindo". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/asg-hires-tom-menrath-to-strengthen-audio-solutions/. Enkosi.